SingForYou.net - Warso Mo Nae Pyan Khel Par
Warso Mo Nae Pyan Khel Par
Tags : BaNyar Oo
By : BaNyarOo on Feb 25, 2010
Score: 65 Rating: 5.00 Comments: 21
Warso Mo Nae Pyan Khel Par's Description
ဗညားဟန်သီချင်းကို ဗညားဦးက ပြန်လည် ခံစား သီဆိုရင်း မွန်တို့ဌာနီ ရာမညဆီသို့ အလည် လာခဲ့ကြပါလို့ ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ် ... :)
paradise on Feb 26, 2010 0
★__________★__★★★_____★★______★_★★★_ ★__★_.____★____.★_____★_____★___.★_________ ★___★_.___★____.★____★____________★_________ ★____★.___★____.★___★_____________★_★★___ ★_____★.__★____.★____★____________★_________ ★______★_.★____.★_____★______★__.★_________ ★__________★__★★★______★★_____.★_★★★
sumaylay on Feb 26, 2010 0
mood apyae nae so twar tar pal bro.......very nice par..........*****
hippo on Feb 25, 2010 0
နားထောင်လို့ ကောင်းမှကောင်း ... ***** :)))
lalaynge on Feb 25, 2010 0
ဆိုသွားတာ ရမ်းကောင်း လွတ်ကောင်းသဗျာ...*****
BaNyarOo on Feb 25, 2010 0
နားထောင်တာ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ .. :):):)
maureen on Feb 25, 2010 0
ခံစားချက်နဲ့ဆိုသွားလို့လားမသိဘူး အရမ်းကောင်းတယ်...အားပေးနားဆင်သွားပါတယ်...************************** for u...
ပန်းကန်ပြားနဲ့ ခံပြီး ဆိုသွားတာလေ ဟဲဟဲ။ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဂျ ... :)))))
mahuyar on Feb 25, 2010 0
၀ါဆိုမိုးနဲ့ ပြန်ခဲ့ပါ တဲ့.. တကယ့်ကို ခံစားချက်နဲ့ကို ဆိုခဲ့တာထင်တယ်.. အသံကလဲ ကောင်း. သီချင်းစာသားလေးကလဲ ကောင်းနဲ့.. ကိုဗညားဦးရေ.. စတားတွေလဲ အများကြီး ပေးခဲ့တယ်.. အားပေးခဲ့တယ်နော်... မွန်လေးရေ... very nice song and voice! :clap :clap :clap
တန်းဂုန်ရအောင် = ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... :) ထွက်တတ်လား အသံ .. ဟီးဟီး။
________´$$$$`_____________________________,,,_______ _______´$$$$$$$`_________________________´$$$`______ ________`$$$$$$$`______,,________,,_______´$$$$´______ _________`$$$$$$$`____´$$`_____´$$`____´$$$$$´______ __________`$$$$$$$`_´$$$$$`_´$$$$$`__´$$$$$$$´______ ___________`$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_´$$$$$$$´_______ ____________`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$`´$$$$$$´________ ___,,,,,,______`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_________ _´$$$$$`____`$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$´_________ ´$$$$$$$$$`´$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´__________ ´$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$´__________ ___`$$$$$$$$$$$$$$$_$$$$$$$_$$$$$$_$$$$$$´__________ ______`$$$$$$$$$$$$$_$$$$$__$$_$$$$$$_$$´___________ _______`$$$$$$$$$$$$,___,$$$$,_____,$$$$$´____________ _________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´____________ __________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_____________ ____________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´______________ _______________`$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$´_______________ အရမ်းမိုက်ဒယ် သယ်ရင်း ၅စတားစ် ယူတော့ ဗျာ :P:):D
ဟုတ် .. ယူလိုက်ပြီ .. ချတားးးးးးကို ပြောတာ ဟဲဟဲ။ လက်ပုံက မိုက်လှချည်လား .. မလိမ္မာဘူး သူခိုး ဒမြ ဟီးဟီး။
pp01 on Feb 25, 2010 0
Kg tal..bro yay..aye aye nyein nyein lay:D*****GREAT!!
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ည .. နောက်လဲ အားပေးပါဦး ခင်ည .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ည ... :)
turikimuriki on Feb 25, 2010 0
wow.. nice2listen par shint ..arr pay thwar par tel shint .... sing more nor ... 5*4u :))))
သိုင်းခရုပါ ခင်ည ... :):):)
Phyogyi on Feb 25, 2010 0
banyar han yelz Relative..pyit melz. htin telz..:)))))))))))) ..ဆိုထားတာ တကယ်ကို အေးအေးလေးနဲ့ ကောင်းပါတယ်ဗျာ.. Many*********************************************..for..bro..BaNyarOo..yay..နားထောင်အားပေးသွားပါတယ်ဗျာ...:))))))))))))))).............bro..RPG....
မွန်ပြည်နယ်အကြောင်း သီချင်းဆိုတယ် ဆိုတော့ အမျိုးတော်တယ်လေ .. ဟီးဟီး။ ဆိုသံ နည်းနည်း တိုးသွားတယ်ဗျာ .. ချိန်တာ အဆင်မပြေလို့ပါ။ အားပေးတာ ကျေးဇူးပဲ ဘရာသားးးးးရေ ...
susu23 on Feb 25, 2010 0
ma so buu bro yay classical ta chin so htar tar lal kg tal byo.......arr pay twar par tal..........**********4u.......
ဟုတ်ကဲ့ .. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျား .. နောက်လဲ အားပေးဦးနော်။
achitsonethu on Feb 25, 2010 0
wow takal atan tu tal so twar tar ayan kg par tal shin ~~:CLApzzzzzzzzzzz *********))))
သိပ်မမြှောက်နဲ့နော် မြောက်ချင်နေတာ .. ဟဲဟဲ။ အားပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျား .. :)
Feedback : 7
Subscribe to BaNyarOo